HP weputara Stream 11, laptọọpụ dị ọnụ ala ma dịkwa fechaa | Akụkọ akụrụngwa
HP na-ebupụta Stream 11 ahụ, laptọọpụ dị ọnụ ala ma dịkwa fechaa
HP ka na-eme ka mmụọ nke ịmepụta ụdị kọmpụta na akwụkwọ ndetu ọhụụ na ire ahịa nke ndị a ka bara uru. Na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya HP ewepụtala ezinụlọ ọhụrụ nke laptọọpụ na ihe nlereanya nke ezinụlọ a nke yiri ka ọ na-agbanwe mpaghara ahụ ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala na-egosi ọhụụ dị iche ugbu a. Obufa ubon a na akpo ya Stream na ihe nlere mbu n’ime uzo a gha abu 11 iyi. Aha nke Stream 11 sitere na nha ihuenyo nke bụ 11,2 sentimita asatọ.
HP Stream 11 na-elekwasị anya njikarịcha nke usoro nkwukọrịta, karịsịa wifi na ọrụ bluetooth ka sistemụ arụmọrụ jiri ngwa igwe ojii ma ọ bụghị ngwa ala ma yabụ akụrụngwa arụ ọrụ zuru oke maka obere ọnụahịa.
N'ihi ya, Stream 11 anaghị elekwasị anya na oke ebulu ma ọ bụ ihe nhazi ọ na-eji mana na sistemụ nkwukọrịta na sava nke ahụ agara mee ka ngwa ngwa nke laptọọpụ Stream 11 wee rụọ ọrụ.
Iyi 11 ga-enwe akwụkwọ akụkọ nke ngwa ndị na-arụ ọrụ site na igwe ojii
Iyi 11 nwere ihuenyo 11,2 nke nwere mkpebi FullHD, 4 Gb nke ebule ebule, Intel Celeron N3060 processor na 32 Gb nke nchekwa dị n’ime. Ọzọkwa sistemụ nrụọrụ ga-abụ Windows 10 juputara na igwe ojii dị ka ngwa Office ma ọ bụ Foto HP.
Ma igwe ojii agaghị abụ naanị ihe pụrụ iche gbasara oke iyi nke HP. Ego nke Stream 11 na ndị ọzọ nke laptọọpụ na iyi ahụ ha ga enwe onu ahia di ala. Yabụ na Stream 11 ga-akwụ ụgwọ na $ 199 na ndị na-esote ya, a ga-akwụ ụgwọ Stream 14 na $ 299. Iyi 11 ga-abụ na ire na emechaa onwa a na ụdị ndị ọzọ nke ezinụlọ a ga-amalite ọnwa na-abịa.
Ntụnyere dị n'etiti chromebooks na Stream 11 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu, mana na Stream 11 anyị nwere Windows 10 nke bụ sistemụ arụmọrụ karịa Chrome OS, opekata mpe maka oge ahụ, yabụ ọ dị ka n'akụkụ a Stream 11 dị mma, mana Ndi mme owo ẹyenen̄ede ẹma enye? Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Laptọọpụ » HP na-ebupụta Stream 11 ahụ, laptọọpụ dị ọnụ ala ma dịkwa fechaa
Kọmputa 32 GB? Echeghị m na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ị naghị eche
Ihe ngosi 7 Galaxy ga-enweta Android Nougat na Ọktọba ma ọ bụ Nọvemba dị ka Samsung kwadoro
Niku, ihe nke usoro mbara igwe nke megidere ihe omuma anyi